Xiaomi skateboard eletriki dị ugbu a ọrụ ya na ọnụahịa ya ga-ahapụ gị ka ịmeghe ọnụ gị | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi Ọ gaghị akwụsị iju anyị anya, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ bụghị ụgbọ ala mbụ maka ojiji nkeonwe ka ewepụtara n'ihu ọha, na nkeji ole na ole gara aga, onye nrụpụta China ahapụla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla n'ọnụ ya meghere na ngosi nke skateboard eletrik, nke ị ga-achọ maka imepụta ya ma kwenye gị na ọnụahịa ya mara mma.
Ewubere na aluminom, anyị nwere ike ịpịa ya n'oge ọ bụla ma bufee ya n'ụzọ dị nkasi obi n'ihi ịdị arọ ya bụ kilogram 12.5. O nwere ike zuru oke, dịka ọmụmaatụ, ịga ọrụ na batrị ya nwere ihe dị ka kilomita 30.
Pricegwọ ya, nke anyị nyerela n'ihu, bụ 1.999 yuan ma ọ bụ ihe otu gbanwere ya ihe dị ka euro 275, nke bụ ọnụ ala dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọnụahịa nke skateboard eletriki Xiaomi ọhụrụ a yiri ka ọ dị oke ọnụ, chee echiche banyere ego ị na-akwụ na ụgbọ oloko ma ọ bụ na bọs na-akpọrọ gị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
N'adịghị ka ngwaọrụ Xiaomi ndị ọzọ, a enweghị ike ịchịkwa skateboard eletrik a site na ngwaọrụ mkpanaka anyị, ọ bụ ezie na a ga-enwe ngwa ga-enyere anyị aka ịmata batrị fọdụrụnụ anyị hapụrụ iji gaa n'ihu na-aga n'okporo ámá na ọsọ ọsọ.
Akuko ojoo di na ihe a nile bu na Ngwaọrụ a ga-adị maka ire ere na China, opekata mpe ugbu a Ma ọ bụ na dịka o mere na ngwaọrụ ndị ọzọ dị iche iche, ọ ga-akwụsị iru ngwaọrụ ndị ọzọ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
You ga-azụta skateboard eletriki ọhụrụ nke Xiaomi iji gaa rụọ ọrụ na ya, dịka ọmụmaatụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe ọkụ eletrik nke Xiaomi na-arụ ọrụ ugbu a na ọnụahịa ya ga-ahapụ gị ka imeghe ọnụ gị